Milalao tany ny Gasy ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nangonin'i JRR il y a 12 jours
Manana olana goavana isika amin’ny resaka fananan-tany. Lasa olana ara-piarahamonina mihitsy aza ny fananan-tany. Tato ho ato dia mivadika resaka politika lalina ihany koa. Saika manerana ny firenena dia andrenesana olana avokoa : fifandonana, fikomiana, tribonaly, fidirana am-ponja, faharavan’ny fianakaviana, fahantrana ary fahafatesana aza. Hatreto anefa mbola tsy misy fomba mazava iatrehana ireny olana ireny fa vao mainka miditra amin’ny kizo lalina sy midadasika kokoa.
Ny hoe « milalao tany ny Gasy » dia fomba ilazana ny fomba iatrehantsika ity olana goavana ity, nefa toa tsotsorina sy hamaivanina. Ny fomba notinaizan’ny kolosaina sy ny fiarahamonina nolovaina nefa sarotra zakaina. Te hanao dingan-dava ny handroso isika ka farany milalao afo ihany. Satria na tsy mirehitra aza ny tanimena, ny firehetan’ny ala etsy sy eroa dia faharavan’ny tany. Ka toy ny milalao afo isika amin’ity resaka tany ity.
Amin’ny fitantanana ny fananan-tany, ny lafin-tany, ny fanajariana ny tany, ary ny lalàna momba ny fananan-tany no misy olana tsy mazava nefa tsy voavaha. Sampandraharaham-panjakana nampiditra olona am-ponja maro ny resaka risoriso eny amin’ny « domaine », saingy mifamatotra amin’ny fomban’ny minisitra sy ny fitsarana no mampidi-kizo olona maro. Ary rehefa idiran’ny politika ny raharaha vao mainka maloto.
« Hilatsaka ho ben’ny tanàna indray Ingahy Maire, ka tsy sahy miditra amin’ny olan’ny tany loatra, sao mifanohitra amin’ny vahoaka ka tsy lany. Dia mahay roa : tsy te ho ratsy endrika anatrehan’ny vahoaka ; nefa manantena tohana amin’ny mpanambola dia manao sotrobe lava tango, mahay atsy mahay aroa ».
Havan’ny olona ambony ao amin’ny fitondrana ramatoa, ka dia manery sampandraharam-panjakana iray manontolo hanao ny taratasiny, na tsy ara-dalàna aza ; satria misy olona ambony afaka mitrerona ny mpiasa. Asa na « soa » na « ratsy » ny mbola tsy nisian’ny Camera, fa dia voatery nanao sonia na tsy nankatoavina aza ireo mpiasa voatery. Matahotra famindran-toerana na fanesorana amin’ny asa. Dia nanaiky tsy fidiny. Akaiky anefa Antanimora raha misy ny « oaia !oay ».
Nanao kabary ny filoha fa hamerina ny tany amin’ny vahoaka ary hizara izany amin’ny olona. Faly ny mpihaino, saingy fampielezan-kevitra ireny, toa mifanohitra amin’ny fametrahana tany tan-dalàna. Nampiroborobo ny fanaovana an-keriny fananan’olona anefa ny kabary te ho lany.
Dia lalaovintsika ity resaka fanan-tany ity.
Ny fifampitoriana eny amin’ny tribonaly koa anefa dia tsy resaka fangalaran-tany, fa resaka fananan-tany araka ny lovan-drazana tsy mifanojo amin’ny lalàm-panjakana. Manjary fiarahamonina roa samy hafa no fehezin’ny lalàna raha resaka fandovana, ka ny rariny araka ny lalàna manjary tsy rariny ara-piarahamonina. Isika anefa te ho tany tan-dalàna. Koa ny fandovana ve no tsy niova nanaraka ny lalàna sa ny lalàna no tsy mifanaraka amin’ny fandovana ? Natao ho an’iza moa izany ny lalàna ?
Ny vazaha, rehefa tonga teto amintsika dia nametraka ny fananan-tany ho araka ny fihariana tiany hatao. Koa ny fanjakana politika no nametraka ny fandaminana amin’ny fananan-tany. Ny fandovana malagasy anefa tsy resaka fihariana, fa fananana fotsiny. Koa na mahantra aza fa manana lova dia mifikitra eo, na dia iray dia ihany aza. Koa tsy mifanojo ny lalànan’ny fananan-tany sy ny politikam-pihariana ; tsy nihatra ny fitantanana ny lafin-tany sy ny politikam-panajariana araka ny politikam-pihariana. Ny fandaminana ara-politika hitantanana ny tany sy ny fanavaozana tian-katao ara-pihariana no tsy mazava. Dia manjary ady tany ny resaka fandovana fa tsy fihariana ara-toe-karena. Ny tian’ny fanjakana hatao anefa dia fampandrosoana ara-pihariana ; koa hifanohitra hatrany ny resaka fananan-tany araka ny fandovana, sy ny fananan-tany ara-pihariana moderina. Dia tsy hanaja ny fomban-tany ny lalàna, ary hanohitra ny lalàna ny fiarahamonina. Izany no tsy mampandroso ny fiharian’ny isam-pianakaviana sy ny firenena satria miparitaka amin’ny isan’ny taranaka ny tany. Zary mampahantra ny fihariana nolovaina. Politikam-pihariana rahateo kabary ambony vavahady. Izany no manjo ireo « concession » an’ny vazaha, nanjary tany honenana. Nanjavona ny kafe, ny voly fanondrana, ny fambolem-bary (Samangoky, Fiherenana sy Teheza…), fa mpifindra monina no mizara lova.
Ny politika ankapobeny sy ny lalàna ihany anefa no manova ny fananan-tany. Fomba ahafahana mamorona asa koa izany, mba tsy hivangongo an-tanàn-dehibe ny olona, ka hiteraka Andralanitra vaovao.
Andao ho eny amin’ny volana e !
Asa ! Hainareo ve ny tantaran-dRapeto e ? Tantara toa kilalao fahiny, saingy tantaran’ny nofinofim-pamoronana ho an’ny Malagasy te hanakatra ny habakabaka misy iny volana iny. Tsy anjara masoandro akory ! Tsy tana-masoandro e ! Tara-bolana. Rapeto ilay lehilahy goavam-be, Malagasy voalohany nanakatra ny volana ho kilalaon-janany. Rapeto ilay afaka namorona aingam-panahy ara-java-kanto nolovain-jafy amin’ny valiha torofolo. Rapeto ilay nanajary an’i Betsimitatatra ho tanimbary namatsy an’Antananarivo. Rapeto ilay nanao tohodrano voalohany, nefa tsy navoakan’ny sekoly ambony, saingy nahazoantsika an’Itasy ho farihy mpamatsy hazandrano an’i Madagasikara. Rapeto ilay nanome rano ny ombin-dRasoalao anabaviny tany Mandrindrano ; Rasoalao ilay mpiompy omby tamin’ny faritra afovoany andrefan’ny Nosy ka nampiroborobo ny fiompiana Jamoka, sady atao sorona no natao Jaka. Izany no fanajariana ny tany mahomby nifanaraka amin’ny fiharian-karena nivelomany… angano !angano !
Andao hanovo amin’ny anganon’ny Ntaolo sao misy fandaminana ny fiainana hifamatotra amin’ny tany amin’ireny.